You are at:Home»2015»May (Page 3)
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-05-20 16:14:53
Mg Bo Bo
Gen Wave အဖွဲ့မှ ကိုမိုဃ်းသွေး ပုဒ်မ ၁၈ နဲ့ အမှုဖွင့်ခံရ 19.5.15/ RFAအလွတ်သတင်းထောက် ကိုပါကြီး သေဆုံးမှုကို အမှုမှန်ဖော်ထုတ်ပေးဖို့နဲ့ ကျောင်းသားသပိတ်ကို အကြမ်းမဖက်ဖို့ ရန်ကုန် မြို့ မြို့တော်ခန်းမရှေ့မှာ ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များ Generation Wave အဖွဲ့ဝင် ကိုမိုဃ်းသွေးကို ကျောက်တံ တားမြို့နယ် ရဲစခန်းက ပုဒ်မ ၁၈ နဲ့ အမှုဖွင့်ထားပါတယ်။ တရားမဝင် စီတန်းလှည့်လည်ခြင်း ပုဒ်မ ၁၈ နဲ့ ကျောက်တံတား ရဲစခန်းက အမှုဖွင့်ထားကြောင်း ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြား ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ကိုမိုဃ်းသွေးကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် အောက်တိုဘာလက အလွတ်သတင်းထောက် ကိုပါကြီးသေဆုံးမှုကို အမှုမှန်ဖော်ထုတ်ပြီး အပြစ်ရှိသူကို အမှု ဖွင့်အရေးယူပေးဖို့အတွက် ၈၈ မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့ အစည်းအပါအဝင် အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း ၄ဝ ကျော်က မြို့တော်ခန်းမရှေ့မှာ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ မေလ ၂ ရက်မှာ လက်ပံတန်းမြို့က ပင်မကျောင်း သားသပိတ်စစ်ကြောင်းကို အကြမ်းမဖက်ဖို့အတွက် ကျောင်းသား ၊ ကျောင်းသူတွေနဲ့ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေက မြို့တော်ခန်းမရှေ့မှာ ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီး အဲဒီ့ဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့ ဆက်စပ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-05-20 12:29:45
Four human rights activists have been arbitrarily arrested and detained in Myanmar after participating inapeaceful demonstration against the shooting to death ofaprotester the week before. The four have been detained solely for the lawful exercise of their right to freedom of peaceful assembly a…
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-05-20 12:28:13
(၂၀၊ ၅၊ ၂၀၁၅ ရက်နေ့ ပုဒ်မတွေ ထပ်တိုးလိုက်ပြန်ပြီ မြင်းခြံ)မတရားပုဒ်မတပ် မတရားမှုတွေနဲ့ ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်း ခံထားရတဲ့ ကိုသန့်ဇင်နဲ့ ကိုညဏ်ကြီး(ခ)ကိုညဏ်မြင်သန်းကို မြင်းခြံမြို့ အမှတ် ၁ မြို့မ ရဲစခန်းက အမှုတွေ ထပ်တိုးပြီး အမှုဖွင့်လိုက်ပြန်ပါပြီ။ကိုသန့်ဇင်ကို ယခင်စွဲထားတဲ့ ပုဒ်မ ၁၄၃၊ ၁၄၅၊ ၅၀၅ အပြင် ပညာရေး သပိတ် ရက် ၆၀ ရာဇသံ ပေးပြီး ၊ ၂၂၊ ၁၁၊ ၂၀၁၄ ရက်က မြင်းခြံမြို့ ကျောင်းသား သပိတ် ပြု လုပ်၍ ပုဒ်မ ၁၈ နဲ့ လက်ပံတန်း ကျောင်းသား သပိတ် အကြမ်းဖက်မှုမဖြစ်ရေး လှုပ်ရှားမှုကို ပြု လုပ်ရာ ပုဒ်မ ၁၈ တို့ ထပ်တိုး အမှုဖွင့်လိုက်တာပါ။ကိုညဏ်မြင့်သန်းကို ယခင်စွဲထားတဲ့ ပုဒ်မ ၁၄၃၊ ၁၄၅၊ ၅၀၅ အပြင် ပညာရေး သပိတ် ရက် ၆၀ ရာဇသံ ပေးပြီး ၊ ၂၂၊ ၁၁၊ ၂၀၁၄ ရက်က မြင်းခြံမြို့ ကျောင်းသား သပိတ် ပြု လုပ်၍ ပုဒ်မ ၁၈ ထပ်တိုး ဖွင့်လိုက်တာပါ ။ထပ်တိုး အမှုများ အမှု ထပ်ဖွင့်ပြီး ပညာရေး သပိတ် ရက် ၆၀ ရာဇသံ ပေးပြီး ၊ ၂၂၊ ၁၁၊ ၂၀၁၄ ရက်က မြင်းခြံမြို့ ကျောင်းသား သပိတ် ပြုလုပ်ရာ ပါဝင်သည့် ကျောင်းသား ၅ ဦး ပုဒ်မ ၁၈ နဲ့ တရားစွဲဆိုလိုက်ပါတယ်။ကိုသန့်ဇင်၊ ကိုညဏ်မြင့်သန်၊ ကိုစည်သူမြတ် ၊ ကိုကျော်သန်းထွန်း ၊ ဦးစိန်ဝင်း ၊ မဖြူတို့ကို လက်ပံတန်း ကျောင်းသားသပိတ် အကြမ်းမှု ရှုံ့ချပွဲ ပြုလုပ်၍ အဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း ခံထားရတာဖြစ်ပြီး ၂၇၊ ၅၊ ၂၀၁၅ ရက်နေ့ ထပ်မံ ရုံးချိန်း ထားပြီး ကိုသန့်ဇင်၊ ကိုညဏ်မြင့်သန်းတို့ကို နောက်ထပ် ၃၊ ၆၊ ၂၀၁၅ ရက်နေ့မှာ ထပ်ပြီး ရုံးချိန်း အမှုစစ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။မတရားမှုတွေကြီးစိုးလို့ လုပ်ချင်တိုင်ကို လုပ်နေကြတော့တယ်…။မိုးစက် (မြင်းခြံ)
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-05-20 09:25:40
ယူနတီဂျာနယ်မှ ဂျာနယ်လစ်များ၏ အထူးအယူခံခွင့်အတွက် လျှောက်လဲထားသော ပြစ်မှုဆိုင်ရာ…
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-05-18 09:43:35
AAPP(မြန်မာ) နှင့် FPPS (ညောင်လေးပင်ခရိုင်)တို့ပူးပေါင်းပြုလုပ်သော အခြေခံလူ့အခွင့်အရေး၊အသွင်ကူးပြောင်းရေးဆိုင်ရာတရားမျှတမူ့သင်တန်း ကို 7.5.2015မှ16.5.2015ထိ့ညောင်လေးပင်မြို့ တ.ဆ.ည ခန်းမတွင်ကြုလုပ်ခဲကြသည်။16.5.2015ရက်နေ့တွင် ဦးဝင်းတင်ဖောင်ဒေးရှင်းမှထောက်ပံငွေရရှိ့သော ညောင်လေးပင်၊ရွှေကျင်၊ကျောက်တံခါးမြို့တို့မှနိုင်ငံရေးအကျဉ်သားဟောင်း ၈ ဦးအားထောက်ပံငွေပေးအပ်ပွဲနှင့်သင်တန်းဆင်းပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပါသည်။့ 
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-05-16 05:44:19
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-05-15 05:48:20
ရဲဘော်တွေကို အားပေးရင်း မတရားမှုကို တော်လှန်ခဲ့ကြတယ်။။။(မြင်းခြံ)ဒီနေ့(၁၅၊ ၅၊ ၂၀၁၅)မြင်းခြံ ခရိုင် တရားရုံး မတရားမှုတွေနဲ့ မတရားပုဒ်မတို့တပ်ဖမ်းထားတဲ့၁။ ကိုသန့်ဇင်၂။ ကိုဥာဏ်မြင့်သန်း၃။ ကိုစည်သူမြတ်၎။ ကိုကျော်သန်းထွန်း၅။ ဦးစိန်မြင့်၆။ မဖြူ တို့ကို ရုံထုတ်ပါတယ်မိုးစက် (မြင်းခြံ)
ကွဲပြားခြားနားစွာ အုပ်ချုပ်နေတဲ့တရားစီရင်ရေးလား၊ ဟိုတရားရုံးက အမျိုးသမီးတွေကိုလက…
ကွဲပြားခြားနားစွာ အုပ်ချုပ်နေတဲ့တရားစီရင်ရေးလား၊ ဟိုတရားရုံးက အမျိုးသမီးတွေကိုလက်ထိပ်မခတ်၊ သာယာဝတီတရားရုံး ရုံးထုတ်မှာတော့ EU ကလာတော့လက်ထိပ်မခတ်ပဲ လုပ်စားသွားပြန်တယ်။
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-05-14 16:09:43
Myo Min Swe
ဂျပန်ရှိမြန်မာသံရုံးရှေ့မှ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွတ်မြောက်ရေး(လက်ဝါးကမ်ပိန်း)လှုပ်ရှားမှု။ (13.5.2015)
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-05-14 16:08:51
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-05-14 06:44:56
တရုတ်သံရုံးအနီး ဒေါ်ခင်ဝင်းသတ်ဖြတ်သူ ဖေါ်ထုတ်ပေးရေး ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုသည့်အတွက် ပုဒ်မ ၅၀၅.(ခ) အပါအဝင် ပုဒ်မ လေးခုဖြင့် ဖမ်းဆီး တရားစွဲဆိုခံထားရသည့် ကိုနေမျိုးဇင် နှင့် ကိုတင်ထွဠ်ပိုင် ကိုသန်းဆွေ ဒေါ်နော် အုံးလှ ဒေါ်စိန်ထွေး ဒေါ်လေးလေး တို့အား မနက်ဖြန် မေလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ဒဂုံမြို့နယ် တရားရုံး တွင် အမိန့်ချမှတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ မတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံထားရသည့် ရက်ပေါင်း ၁၃၅ ရက် အကြာ မှ ချမှတ်မည့် အမိန့််သည် မြန်မာ့တရားစီရင်ရေးစနစ် နောက်ဆုံး အခြေအနေကို ပြသလိမ့်မယ်လို့ ကိုနေမျိုးဇင် က ပြောခဲ့ပါသည်။ ပြည်ထောင်စု အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင် ပြည်သူ့အစိုးရ လား၊ ပြည်ပ သြဇာခံ ရုပ်သေးအစိုးရ လား ဆိုသည်ကို အဖြေပေးမည့် အမှုဆုံးဖြတ်ချက်ကို လေ့လာနားထောငိရန် တရားမျှတမှု လိုလားသူမိတ်ဆွေများအား အသိပေးအကြောင်းကြားပါသည်။
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-05-14 02:37:25
“အမှန်ဆို ကျွန်တော်မူးလဲပြီး အဲဒီနေရာမှာတင် သေသွားနိုင်လောက်အောင် ခံစားခဲ့ရတယ်” လက်ပံတန်းကျောင်းသားသပိတ် အကြမ်းဖက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်၌ ရဲအမြောက်အမြား၏ ၀ိုင်းရိုက်မှုကို ခံခဲ့ရသူ အသက်မပြည့်ကျောင်းသား မောင်အောင်မင်းခိုင်နှင့် အင်တာဗျူး ———————————————————————————ရွှေဘိုခရိုင် အခြေခံကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဥက္ကဋ္ဌတစ်ဦးဖြစ်ပြီး လက်ရှိ အချိ်န်တွင် န၀မ တန်း ကျောင်းသား တစ်ဦးဖြစ်သူ၊ အမျိုးသားပညာရေး ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက် မန္တလေး မြို့မှ စတင်ပြီး သပိတ်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့စဉ် ကတည်းက ပါဝင်ခဲ့သူ မတ် ၁၀ ရက်က လက်ပံတန်းမြို့နယ်၌ သပိတ်မှောက် ဆန္ဒပြတောင်းဆိုရာတွင် ရိုက်တာ သတင်းဌာန မှ ဓာတ်ပုံ သတင်းထောက် ရိုက်ကူး ထားသည့် အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းရာ တွင် ရဲများ ၀ိုင်းရိုက် ခံရသည့် ဓာတ်ပုံ ထဲမှ ကျောင်းသားဖြစ်သူ မောင်အောင် မင်းခိုင်နှင့် The Ladies တို့ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းရာတွင် …မေး – ရဲတွေဝိုင်းအရိုက်ခံရတဲ့ ဓာတ်ပုံထဲ မှာပါတာ ညီလေးလားမသိဘူး။ဖြေ – ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ ကျွန်တော် မောင်အောင်မင်းခိုင်ပါ။မေး – ဒီကျောင်းသားသပိတ်စစ်ကြောင်းထဲ ညီ လေး စတင်ပါဝင်လာတာ ဘယ်အ ချိန်ကာလကတည်းကပါဝင်ခဲ့တာလဲ။ဖြေ – ကျွန်တော် စစ်ကြောင်းထဲပါလာ တာက မန္တလေးက စထွက်ကတည်းက ဖြစ်တယ်။ နောက်တစ်ခါမှ မပြန်ဖူးဘူး။ လက်ပံတန်းရောက်တဲ့အထိ ပါဝင်လာတာဖြစ်တယ်။မေး – အခုလိုစစ်ကြောင်းထဲ ပါလာအောင် တစ်ယောက်ယောက်က စေ့ဆော်လို့ လား၊ ဒါမှမဟုတ် မိမိသဘောဆန္ဒ အရ လိုက်ပါခဲ့တာလား။ဖြေ – ကျွန်တော်ဆန္ဒနဲ့ ကျွန်တော် ပါ လာတာဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်ကသမဂ္ဂ ၀င်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဖြစ်တယ်။ အခြေခံကျောင်းသားသမဂ္ဂ (အကသ) ခေါင်းဆောင် ဥက္ကဋ္ဌတစ်ဦးအနေနဲ့ လည်း ဖြစ်တယ်။ အခြေခံအနေနဲ့ ပါဝင်လာတာဖြစ်တယ်။ ဒီဥပဒေကြီး က ကျွန်တော်တို့ အခြေခံတွေကို တိုက်ရိုက်ကြီးသက်ဆိုင်တယ်။ တိုက် ရိုက်ကြီးလည်း အကျိုးသက်ရောက် စေတဲ့အတွက်ကြောင့် ဖြစ်တယ်။ အဲ ဒီ့ဥပဒေကြီးက ကျွန်တော်တို့ အခြေခံ ကစပြီး ဖိနှိပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့အခြေခံမှာ လိုအပ်တာ တွေ ရှိတဲ့အတွက် ပညာရေးဥပဒေကို ကန့်ကွက်သပိတ်မှောက်ဖို့ စတင်လာ ရခြင်းဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီဥဒေမူကြမ်း စတင်ရေးဆွဲကတည်းက ကျွန်တော် တို့ ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့တာ ဖြစ် တယ်။ တောက်လျှောက် ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။ မေး – ညီလေး လက်ပံတန်း အရေးအခင်း တုန်းက ဘယ်လိုစတင် ထိန်းသိမ်းခံ ရတာလဲ၊ ပြောပြပေးလို့ ရမလား။ဖြေ – ကျွန်တော် စတင်ဖြစ်ကတည်း က အဖမ်းခံမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ ပဋိပက္ခဖြစ်ချိန်တုန်းက ကားအနောက် ထဲမှာရှိတယ်။ အဲ့အချိန် ခဲတွေဘာ တွေ ပေါက်တယ်။ ကျွန်တော့်ရှေ့မှာ ကားအောက်ထိုးတဲ့ ဂျမ်းတုံးက ကျလာတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်ရယ်၊ ဦးသိမ်းရယ်က ကားပေါ်ပြေး တက်ပြီး ကားပေါ်မှာနေတယ်။ အဲဒီ့ အချိန်မှာ ရဲတစ်ယောက်ကလာပြီး ဂျမ်းတုံးကိုကိုင်တယ်။ ဂျမ်းတုံးနဲ့ ကျွန် တော်တို့ကို ရွယ်တယ်။ ရွယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ကလည်း အေးအေး ဆေးဆေး အဖမ်းခံမယ်။ အေးအေး ဆေးဆေး ရဲတွေကားပေါ် လိုက်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို မရိုက်ပါနဲ့လို့ ပြော ခဲ့တယ်။ အဲ့လိုပြော တာတောင်မှ ကျွန်တော်တို့ကို ဂျမ်းတုံးနဲ့ရွယ်ပြီး ရိုက်မလိုလုပ်ပြီး အောက်ကရဲတွေက အယောက် လေးဆယ်၊ ငါးဆယ် လောက်ရှိတယ်။ အဲ့မှာ ဦးသိမ်းကို ဆွဲသွားတယ်။ ဦးသိမ်းကို ၀ိုင်းရိုက် တယ်။ ကျွန်တော့်နောက်ကို အယောက် သုံးဆယ်လောက်ရှိမယ် ၀ိုင်း ရိုက်တယ်။ ပုဆိုးကိုလည်း ဆွဲချွတ်တယ်။ ပုဆိုးကိုဆွဲချွတ်ပြီးတော့ ကျွန်တော်ပုဆိုး မ၀တ်နိုင်လောက်အောင်ကို ရိုက်တယ်ဗျ။ ပုဆိုးမ၀တ်နိုင်အောင် ရိုက်တဲ့အ ခါမှာ ခေါင်းကို တုတ်တွေ၊ နံပါတ်တုတ် တွေ အခြားရဲတွေက ဆီးကြိုရိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်ခေါင်းမှာ ဒဏ်ရာတွေက အခုထိ အကြီးကြီး ဖြစ်နေတယ်။ ဒဏ်ရာက အခုထိ မပျောက်သေးဘူး။ ဘုတွေ ကလည်း အပိန့်ထွက်နေပြီ။ ခေါင်းမှာ အခု အမာကြီးလိုဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်တော် အဲ့လို အရိုက်ခံရရင်း ကားပေါ် ရောက်တော့မယ့်အချိန်မှာ ကျွန်တော် မူးလဲမတတ် ကို ဖြစ် သွားသေးတယ်။ ဘေးမှာ ကျွန်တော့်ကို ထမ်းထားတဲ့ ရဲတစ်ယောက်ရှိလို့ အဲ ဒီ့ရဲကို မှီပြီး ကျသွားတယ်။ အမှန်ဆို ကျွန်တော်မူးလဲပြီး မေး – သာယာဝတီ အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ ဘယ်လိုမျိုး ခံစားကြုံတွေခဲ့ရလဲ။ဖြေ – အခက်အခဲတွေ အများကြီး ကြုံ တွေ့ခဲ့ရတယ်။ ကျွန်တော်တိ်ု့ ရောက် လာတဲ့ ထောင် ထဲ စရောက်ခါစတုန်း ကဆိုရင် အခက်အခဲတွေ အကြီးအကျယ်ကို ကြုံခဲ့ရတယ်။ မတ်လ ၁၀ ရက်နေ့တုန်းကဆိုရင် တစ်နေ့လုံး ထမင်းလည်း မစားရဘူး။ မနက်စာဆိုလည်း လက်ဖက်ရည်နဲ့ မုန့်ကိုပဲ သောက်ရသေးတယ်။ အဲ့အချိန်မှာ အခုလိုအရိုက်ခံရပြီး အဖမ်းခံခဲ့ရ၊ ဘာမှမစားရဘဲ ထောင်ထဲရောက်တယ်။ ထောင်ထဲရောက်ပြီးတဲ့ အခါကျတော့ ထမင်းလာကျွေးတယ်။ ထမင်းကလည်း မကောင်းဘူး။ ဆန်ကလည်း မကောင်းဘူး။ စားလို့မရအောင်ကိုပဲ။ ဟင်းကလည်း မပါတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တစ်ရက်လုံး အစာငတ်သွားတယ်။ အစာငတ်ပြီး တစ်ကိုယ်လုံး ညောင်းကိုက်လို့ ညည်းညူနေရတယ်။ ဒဏ်ရာက နာတော့ တစ်ညလုံး အိပ်လို့မရဘူး။ အဲ့ဒီအတွက် မနက်ကို မြန်မြန်ရောက် ပါစေလို့ ဆုတောင်းနေရတယ်။ မနက်လင်းလို့ ဆန်ပြုတ် လာတိုက်တော့ ဆန်ပြုတ်က ဘာအရသာမှမရှိဘူး။ အဲ့ဒီတော့ သောက်မရဘူး။ နေ့လယ်မှ နောက်တစ်ခေါက် ဆန်ပြုတ် လာတိုက်တယ်။ အဲ့ဒီနေ့လယ်မှာပဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တိုက်ဘေးမှာ ဆေးရုံတက်နေတဲ့ အစ်ကိုကြီး တစ်ယောက်က ဆားတို့ ဟင်းချိုမှုန့်တို့ လာပေးတဲ့အတွက် ကျွန်တော် ခတ်သောက် ရတယ်။ ဆန်ပြုတ်သောက်ပြီး အဲ့ဒီထောင်ထဲက ဆေးရုံမှာ သုံးရက်လောက် တက်ရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို ရုံးချိန်းတွေခေါ်တယ်။ ရုံချိန်းတွေ ဘာတွေခေါ်တဲ့အတွက် အစားအသောက်တွေ ရပြီး နေရတာ အဆင်ပြေလာတာခင်ဗျ။ နို့မို့ဆို အဆင်ပြေမှာ မဟုတ်ဘူး။ ထောင်ထမင်း ထောင်ဟင်းက စားလို့မရအောင်ကို တအားဆိုးတာဗျ။ အရသာလည်း မရှိဘူး။ မေး – နောက် ခြင်ထောင်တွေထောင်ခွင့်ရ တယ်။ အဲ့ဒီဟာက ဘာကြောင့်ပါလဲ။ဖြေ – ဟုတ်ကဲ့ ခြင်ထောင်တောင်းတဲ့ ကိစ္စကလည်း ကျွန်တော်တို့ ထောင်ကြီး က ရေတွေ မသန့်ဘူး။ ကျွန်တော် တို့ အဆောင်ရဲ့ရှေ့မှာ ရေကန်ရှိ တယ်။ အဲ့ဒီရေကန်ကြီးကလည်း အမှိုက်တွေ ဘာတွေနဲ့ဆိုတော့ အကောင် တွေ ခြင်တွေ ဖြုတ်တွေပါ ထွက် တယ်။ ဖြုတ်တွေထွက်တယ်ဆိုတော့ အခုချိန်ကလည်း နွေရာသီဆိုတော့ ပတ်ပတ်လည်မှာ အုတ်တံတိုင်းတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် လေကမ၀င်ဘူး။ လေကလည်း မ၀င်၊ အကောင်တွေ ကလည်း ကိုက်တယ်။ နောက်ချိုးရေက မသန့်တော့ ယားနာတွေက ယားတယ်။ တစ်ကိုယ် လုံး ယားတယ်။ ချွေးတွေကလည်းထွက် အကောင်တွေကလည်း တစ်ချိန်လုံးကိုက်တယ်။ ဒီအတွက် ကျွန်တော်တို့ကို ခြင်ထောင်ပေးပါ၊ ခြင်ထောင်ပေးပါလို့ စကတည်း က အကြိမ်ကြိမ်ပြောခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရုံးချိန်းထွက်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ မီဒီယာ ကိုပြောတယ်။ မီဒီယာကိုပြောပြီးနောက် ကျွန်တော်တို့ ခြင်ထောင်ကိုရဖို့ကိစ္စ အကြိမ်ကြိမ်ပြောတယ်။ ပြောခဲ့တဲ့အခါမှာ နောက်ရက်ကျတော့ သူတို့က ကျွန်တော်တို့ မိဘတွေ ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ်ဝယ်ပြီး ခြင်ထောင်တွေကို ယူလာပေးတာ ဖြစ်တယ်။ မေး – အခု ရုံးချိန်း ဘယ်လောက်ကြာခဲ့သ လဲ။ဖြေ – ရုံးချိန်း ၅ ချိန်းလောက်တောင်ကျော်တယ်ဗျ။ မေး – ဒီလိုရုံးချိန်းတွေ အများကြီးဝင်ခဲ့ပြီးမှ အခုနောက်မှာမှ ဘာလို့အာမခံရခဲ့လဲ။ဖြေ – ကျွန်တော် အာမခံရတာကလည်း အဲ့ဒါအစကတည်းက ရရမှာဖြစ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ဆိုရင် ကျွန်တော် အသက် မပြည့်သေးဘူးဆိုတာ သူတို့သိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့် ဓာတ်ပုံက ပြန့်နေတဲ့အ တွက် ကျွန်တော့်ကိုလွှတ်ရင် ပြဿနာ တက်မှာ စိုးတဲ့အတွက်၊ သူတို့ယူဆ တဲ့အတွက် သူတို့က ကျွန်တော့်ကို မလွှတ်တာဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော့်ကို အခုလို လွှတ်တဲ့ အချိန်မှာလည်း အ သက်မပြည့်သေးတဲ့အတွက် တရား ရုံးမှာ စစ်လို့မရဘူး။ ကလေးသူငယ် ရုံးမှာ စစ်မယ်ဆိုပြီး ကျွန်တော့်ကို အာမခံလွှတ်ပြီး ကလေးသူငယ်ရုံးမှာ စစ်တယ်။ စစ်တယ်ဆိုပေမယ့် ပုဒ်မ တွေက အရင်အတိုင်းပဲ။ ပုဒ်မ-၅၀၅ (ခ) တို့ကလည်း မပြုတ်သေးဘူး။ အရင်စွဲဆိုထားတဲ့ ပုဒ်မတွေနဲ့စွဲထား ဆဲဖြစ်တယ်။ မေး – ထောင်ထဲမှာညီလေးနဲ့ရွယ်တူ အကသ ဘယ်နှယောက်ရှိလဲ။ လက်ရှိအချိန် မှာ သာယာဝတီထောင်ထဲမှာ ကျောင်း တက်ရမယ့်သူတွေ ဘယ်နှယောက် လောက် ရှိသေးလဲ။ဖြေ – ကျောင်းတက်ရမှာက ၁၃ယောက် လောက် ကျန်သေးတယ်။ အဝေးသင် ကနဲ့ဆိုရင် ၁၃ ယောက် မကဘူး။ အဝေးသင်က ၁၁ ယောက်။ ကျွန် တော်တို့ အကသ အနေနဲ့ ၄ ယောက် ပါတယ်။ ၄ ယောက်က ဆယ်တန်း မဖြေလိုက်ရဘူး။ ကျွန်တော့်လိုပဲ။ သူတို့ကတော့ ရွှေဘိုခရိုင်အနေနဲ့ မ ဟုတ်ဘူး။ ရွှေဘိုခရိုင် အနေနဲ့ ကျွန် တော်တစ်ယောက်တည်း ပါလာတာ ဖြစ်တယ်။မေး – ကျန်ခဲ့တဲ့ အကသတွေကကော သူ တို့အသက်တွေ ပြည့်ကြပြီလား။ဖြေ – သူတို့လည်း မပြည်သေးဘူးဗျ။ သူတို့က ၁၇ နှစ်နဲ့ ၁၈ပြည့်ခါနီး ၀န်း ကျင်တွေဖြစ်တယ်ခင်ဗျ။ သူတို့က ဆယ်တန်းတွေလည်း ဖြစ်တယ်။ သူ တို့က ၁၇၊၁၈ ၀န်းကျင်ဖြစ်နေတဲ့အ တွက် ပြန်လွှတ်ဖို့ဆိုတာ အစိုးရပေါ်မူ တည်တယ်။မေး – အခုကိုးတန်းစာမေးပွဲ မဖြေလိုက်ရ ဘူးဆိုတော့ ဒီနှစ် ကျောင်းပြန်တက်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိသလား။ဖြေ – ဒီနှစ်ကျောင်းပြန်တက်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ အိုးဝေကျောင်းကနေပြီး ကျောင်းတက်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် တရားစွဲခံထားရ တဲ့အတွက် တရားရင်ဆိုင်ရမှာ ဖြစ် တယ်။ ဒီလိုတရားရင်ဆိုင်ဖို့ တရား ရုံးချိန်းတွေ ပုံမှန်တက်ရမှာတို့ နောက် စစ်ဆေးပြီး ထောင်ကျနိုင်မှာတွေ ရှိ လာနိုင်တဲ့အတွက် ကျောင်းပြန်တက် ဖို့အတွက် သိပ်မသေချာဘူး ဖြစ်နေ တယ်။ မေး – အခုလို ပြန်လွှတ်တဲ့အပေါ် ဘာများ ပြောချင်လဲမသိဘူး။ဖြေ – ကျွန်တော် အခုလို ထွက်ရတာ ကလည်း အသက်မပြည့်သေးလို့ ထွက်လာရတာဖြစ်တယ်။ သူတို့အ စိုးရက ကျွန်တော့်ကို လွှတ်ချင်လို့လွှတ် တာ မဟုတ်ဘူး။ အသက်မပြည့်သေး တဲ့ကိစ်္စကို ရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့အတွက် လွှတ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ တကယ် တမ်းကျရင် ကျွန်တော့်ကို ဆက်လက် ဖမ်းထားချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ် လို့ သိရတယ်။ ဖမ်းထားဖို့ကိုလည်း အစီအစဉ်တွေ ရှိနေပါတယ်။ အသက် မပြည့်သေးတဲ့အတွက် ရှောင်လွှဲလို့ မရတဲ့အတွက် လွှတ်ပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်တယ်။ တကယ်တမ်း လက်ရှိအ စိုးရက စစ်တစ်ပိုင်းအစိုးရ ဖြစ်တယ်။ အရပ်သားအစိုးရ ပြည်သူ့အစိုးရ ဆိုပြီး သူတို့ကိုယ်သူတို့ လိမ်ညာခဲ့တယ်။ လူတွေကို လိမ်ညာခဲ့တယ်။ အဲဒီ့လို လိမ်ညာတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ သပိတ်စစ်ကြောင်း စထွက်လာပြီး လက်ပံတန်းကိစ္စကနေ စတင်ပြီး သူ တို့အရပ်သားအစိုးရရဲ့ မျက်နှာဖုံးကြီး ကို ခွာချနိုင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ် တိုင်ကလည်း သူတို့မျက်နှာဖုံးကို ခွာ ချနိုင်တဲ့အတွက် သူတို့လုပ်ရပ်တွေ သူတို့မူဝါဒတွေ သူတို့မတရားဥပဒေ တွေက ဘယ်လိုလဲဆိုတာ သိလိုက် ရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို စွပ်စွဲထား တာကလည်း မတရားဥပဒေဖြစ် တယ်။ မတရားဥပဒေ မတရားပုဒ်မ တွေနဲ့ စွဲထားခြင်းဖြစ်တယ်။ ပြည်သူ တွေအနေနဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ဆက်လက်ဝန်းရံပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုပါ တယ်။ ၀န်းရံဖို့လည်း လိုအပ်နေပါ တယ်။ ၀န်းရံနိုင်မှသာ တစည်းတလုံး တည်း ရှေ့ဆက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ အခြေခံကျောင်းသား အနေနဲ့လည်း တစည်းတလုံး တိုက်ပွဲဝင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ အခြေခံကျောင်းသား တွေ အနေနဲ့ရော၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်း သားတွေ အနေနဲ့ရော၊ ပြည်သူတစ် ရပ်လုံးအနေနဲ့ရော ကျွန်တော်တို့နဲ့ ထဲထဲဝင်ဝင် ပါဝင်ရမှာဖြစ်တယ်။ ဒီ အစိုးရက ပညာရေးကို လွတ်လပ်ခွင့် မပေးမချင်း ကျွန်တော်တို့ ပညာရေး မြှင့်တင်လာနိုင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အခုလိုဖြေပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် …// စိုင်းဟန် //The Ladies News Journal
http://aappb.org/bu/2015/05/ လက်ကျန်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများစာရင်း နှင့် ဖမ်းဆီးတ…
လက်ကျန်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများစာရင်း နှင့် ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆို အမှုရင်ဆိုင်နေရသူများစာရင်း
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း(မြန်မာနိုင်ငံ) မှ ပြုစုထားသောလက်ကျန်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစာရင်းကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။ ထိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများစာရင်းအား ၂၀၁၄ သြဂုတ် ၁၇-၁၈ ရက်များတွင် ရန်ကုန်မြို့၌ပြုလုပ်ခဲ့သော အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှထွက်ပေါ်လာသည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အပေါ်တွင် အခြေခံ၍ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည်။ လက်ရှိအစိုးရအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လုံးဝမရှိဟူသော မူကိုစွဲကိုင်ထားပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာတွင် လက်ကျန်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား လုံးဝမရှိတော့ပါဟုသာ တုန့်ပြန်နေသော်လည်း လက်ရှိတွင် မိမိတို့ ပြုစုထားသောစာရင်းများအရ အနည်းဆုံး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား (၁၅၈) ဦးခန့်မှာ မြန်မာနိုင်ငံရှိအကျဉ်းထောင် အသီးသီးတွင် ဆက်လက်အကျဉ်းကျခံနေရ ဆဲဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအား ဖမ်းဆီးထောင်ချနေမှုများသည်လည်း လျော့ပါးသွားခြင်းမရှိသည့်အပြင် ဆက်လက်တိုးပွားလျက်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ နိုင်ငံသားတိုင်း၏ အခြေခံအခွင့်အရေးများအရ ထုတ်ဖော်ဆန္ဒပြခြင်းများအား ပုဒ်မ(၁၈)၊ (၁၉)၊ အပြင် နိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ၅၀၅(ခ)၊ တောင်သူလယ်သမားများအား ပုဒ် ၄၄၇၊ ၄၂၇ အပါအဝင် မတရားသဖြင့် ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုမှုများပြုလုပ်နေခြင်းကို မီးမောင်းထိုးပြသည့်အနေဖြင့် ဤနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများစာရင်းကို ထုတ်ပြန် ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိအခြေအနေထိ ကျွန်ုပ်တို့ လက်လှမ်းမှီသမျှပြုစုထားသော အမှုရင်ဆိုင်ဆဲဦးရေမှာ အနည်းဆုံး ၄၈၁ ဦးခန့်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ ယခုတင်ပြထားသော အမှုရင်ဆိုင်ဆဲစာရင်းတွင် အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးအတွက် ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသော အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ၊ ဝန်းရံပြည်သူများအပါအဝင် ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်တော်နယ်မြေတို့တွင် ပုဒ်မ ၁၇/၁၊ ၁၇/၂ တို့ဖြင့် ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် ဒေသခံတို့၏ စာရင်းများလည်း ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါသည်။
AAPP | Assistance Association for Political Prisoners (Burma) » Blog Archive »…
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း(မြန်မာနိုင်ငံ) မှ ပြုစုထားသောလက်ကျန်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစာရင်းကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။ ထိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများစာရင်းအား ၂၀၁၄ သြဂုတ် ၁၇-၁၈ ရက်များတွင် ရန်ကုန်မြို့၌ပြုလုပ်ခဲ့သော အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှထွက်ပေါ်လာသည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက…
AAPP’s political prisoners list includes individuals that fall under the definition ofapolitical prisoner that was developed during the joint workshop between AAPP and the Former Political Prisoners Society (FPPS) in August 2014. AAPP issues lists of current political prisoners every month as an up-to-date source of information on the political prisoner situation in Burma.
The Government of Burma maintains that there are no longer any political prisoners in the country. In stark contrast to this, as of April 4, 2015, AAPP holds records of 158 political prisoners (including political activists, land rights activists and farmers) currently incarcerated in Burma’s jails, andafurther 481 political activists awaiting trial. These figures indicate that the continued arrest and imprisonment of activists in 2015 shows no sign of abating.
Activists staging protests are continually indicted under sections 18 and 19 of the Peaceful Assembly and Peaceful Procession Act and 505(b) of the Penal Code. In addition, farmers and land rights activists are being charged under sections 447 and 427 of the Penal Code.
AAPP | Assistance Association for Political Prisoners (Burma) » Blog Archive » 158 Current…
AAPP’s political prisoners list includes individuals that fall under the definition ofapolitical prisoner that was developed during the joint workshop between AAPP and the Former Political Prisoners Society (FPPS) in August 2014. AAPP issues lists of current political prisoners every month as an u…
http://aappb.org/bu/2015/05 လက်ရှိအခြေအနေ အကျဉ်းချုပ် ဧပြီလကုန်တွင် နိုင်ငံရေးအ…
ဧပြီလကုန်တွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၁၅၇ ဦး မြန်မာနိုင်ငံ အကျဉ်းထောင်များအတွင်း ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းခံနေရပြီး၊ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုများကြောင့် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ၄၅၃ ဦးတို့ တရားရင်ဆိုင်နေရပါသည်။ အစိုးရအပေါ် နိုင်ငံသားတို့၏ ဝေဖန်မှုများကို တိတ်ဆိတ်သွားစေပြီး၊ အစိုးရအား ဆန့်ကျင်သူ များကို တရားစွဲထောင်ချခြင်းဖြင့် မြန်မာအစိုးရသည် နိုင်ငံသားများ ၏ အခွင့်အရေးများကို ဆက်လက် ချိုးဖေါက်နေပါသည်။ ထို့အပြင် ထိုသူတို့၏ အခြေခံ လူ့အခွင့်အရေးများ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်လည်း ဆက်လက် တားမြစ်ထားဆဲ ဖြစ်ပါသည်။
AAPP | Assistance Association for Political Prisoners (Burma) » Blog Archive » အေအေပီပီမှ…
ဧပြီလကုန်တွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၁၅၇ ဦး မြန်မာနိုင်ငံ အကျဉ်းထောင်များအတွင်း ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းခံနေရပြီး၊ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုများကြောင့် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ၄၅၃ ဦးတို့ တရားရင်ဆိုင်နေရပါသည်။ အစိုးရအပေါ် နိုင်ငံသားတို့၏ ဝေဖန်မှုများကို တိတ်ဆိတ်သွားစေပြီး၊ အစိုးရအား ဆန့်ကျင်သူ များကို တရားစွဲထောင်ချခြင်း…
သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားများကို အများပြည်သူရှေ့မှောက် တရားစီရင်ခွင့်ပြု – DVB
ဖမ်းဆီးခံ သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားတွေနဲ့ ၀န်းရံပြည်သူတွေကို ဒီကနေ့ သာယာဝတီမြို့နယ် တရားရုံးမှာ ဒုတိယအကြိမ် ရုံးထုတ်စစ်ဆေးရာမှာ အများပြည်သူရှေ့တရားစီရင်ခွင့်ရရှိခဲ့ တယ်လို့[…]
AAPP Monthly Chronology for April 2015
Summary of the current Situation As of the end of April, there are 157 political prisoners incarcerated in Burma, with 453 activists currently awaiting trial for political actions. The government continues to violate the rights of its citizens, silencing its critics and prosecuting its opposition, t…
အေအေပီပီမှ ဧပြီလအတွင်း နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်များကို သုံးသပ်တင်ပြချက်April 2015, Chronology (Bur) (New)
လက်ရှိအခြေအနေ အကျဉ်းချုပ် ဧပြီလကုန်တွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၁၅၇ ဦး မြန်မာနိုင်ငံ အကျဉ်းထောင်များအတွင်း ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းခံနေရပြီး၊ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုများကြောင့် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ၄၅၃ ဦးတို့ တရားရင်ဆိုင်နေရပါသည်။ အစိုးရအပေါ် နိုင်ငံသားတို့၏ ဝေဖန်မှုများကို တိတ်ဆိတ်သွားစေပြီး၊ အစိုးရအား ဆန့်ကျင်သူ မ…